HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH SABTI 7-DA -3 -2020
Saturday March 07, 2020 - 09:38:31 in Wararka by Mogadishu Times
Khayre oo daahfuray Munaasabadaha w/weynta ee Maalmaha Xorriyadda R/Wasaaraha XFS Md.Xasan Cali Kha yre ayaa xalay daahfuray munaasaba daha weyneynta xuska 60 sano guurada xorriyad da iyo midnimada Soomaaliyeed, oo lagu qa btay Beerta Qarannimada
Khayre oo daahfuray Munaasabadaha w/weynta ee Maalmaha Xorriyadda R/Wasaaraha XFS Md.Xasan Cali Kha yre ayaa xalay daahfuray munaasaba daha weyneynta xuska 60 sano guurada xorriyad da iyo midnimada Soomaaliyeed, oo lagu qa btay Beerta Qarannimada ee Xafiiska. R/Wasaaraha ayaa caddeeyay in of kas ta oo Soomaaliy eed laga doonayo inuu ka dhabeeyo himilooyin kii halgamayaashii So omaaliyeed ee kasoo shaqeeyay xorn imada dalka oo doonayay in dalka Sooma aliya uu kamid noqdo dalalka ugu horre eyay dunida. Munaasabadda oo ay ka soo qaybgal een Wasiiro Xildhibaano, Gudoomiyaha G/Bana adir, Saraakiisha Ciidamada iyo masuuliyiin kale ayaa R/Wasaaruhu sidoo kale ka sheeg ay in Soomaaliya ay soo ceshan karto shar aftii ay dunida ku la heyd, haddii dhammaan dadka Soomaa liyeed ay ka wada shaqeey an,Md.Xasan Cali Khayre ayaa 4-tii bishii Ja nuary waxaa uu magacaabay guddiga gudd iga qaban-qaabada xuska maalmaha xorriya dda dalka oo shaqadoodu tahay in ay qab an-qaabiyaan xuska maalmaha xorr iyadda ee 26ka Juun iyo 1da July ee sana dkaan 2020. Xuska ayaa sanadkaan kulansaday 2 mu naasabood oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah sanad guurada 60aad iyo sanad guurada 20aad ee dib-u-aasaaska dowla dnimada So omaaliya, oo lagu dhisay D/ Carta ee Jahuur iyadda aan walaalaha na hay ee Djibouti.
Q/Midoobay oo ka digtay Ayax kale oo ka dillaaca Soomaaliya
Hay’adda Jimciyadda Quruumaha ka dhex eysa u qaabbilsan dalagga iyo Beer aha ee FAO ayaa ka digtay inuu Soomaa liya ka kaco taranka Aya xii dho waan ka dil laacay Wadda ma da bariga Afrika, kaas oo waxyeello u geystay Dhul da aqsimeed badan.
Hay’adda FAO oo soo xiganaysa Xafii ska xiriirinta arrimaha Bini-aadam-nimada ee Q/Midoobay (OCHA), ayaa sheegtay in Aya xdu uu haatan ka billowday G/da Wa qooyi bari Soomaliya , iyagdoo la filayo in uu kor dho Todobaadyada soo socda.
Hay’adaha Q/M ayaa ka walaacsan in ay dillaacdo Ugxanka Ayaxa Bilaha uu soo dho waado Roobka ee April iyo June, mar kaas oo laga yaabo in ay Koron-koradu waxyeelle yso dalagga,daaqa iyo Beeraha.
Marwada 1aad Madaweynaha Dalka oo M/Baraawe ka Dhagax Dhigtay Xarun Caafimaad.
Marwada 1aad ee Madaxweynaha dalka Marwo.Saynab Cabdi Macallin oo uu wehel inayo Madaxweynaha D/G/K/G/S Md. C/Cas iis Xasan Maxamed (Lafta-gar een) ayaa si wada jir ah uga dhagax dhig ay M/Baraawe xarun loogu talagalay daryeelka caafimaad ee hooyada iyo dhall aanka.
Marwo Saynab ayaa ka warbixisay mu hii madda qorshaha hirgelinta Xarummaha caa fimaad oo muddooyinkii ugu da mbeey ey ay xoogga saartay, si xal waara loogu helo baa hiyaha iyo dhiba atooyinka caa fi maad ee haysta hooyooyinka So omaaliyeed iyo ubadkooda.
"Xaruntan caafimaad waxa aan ugu tala galnay wax ka qabashada dhibaatooy inka soo wajaha hooyada iyo dhallaanka Soomaa liyeed ee ku nool deegaannada Sh/Hoose, gaar ahaan Baraawe iyo inta ku xeeran. Wa xa nasiib wanaag ah, in re er Baraawe aad noqoteen M-dii 1aad ee nasiib u heshay in laga hirgeliyo mashr uucan.”
MarwSaynab ayaa sheegtay in dhisma ha iyo qalabeynta xarunta lagu hirgelin doo no sanadkan gudihiisa ayaa ku boga adisay maamulka D/Baraawe iyo bulshada ku dha qan sida ay ugu mideysan yihiin horumarka iyo amniga.
"Waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo bulsho-weynta G/Sh/Hoose inay u ta sha daan sidii dib loogu soo noolayn lahaa ade egyada aasaasiga ah.”
Dhankiisa, Madaxweynaha D/G/K/G/S. Md. Lafta-gareen ayaa uga mahad celiyey Marwada 1aad Madaxweynaha Dalka hir ge linta Xarunta Caafimaadka Hooyada iyo Dha llaanka ee Baraawe, isagoo tilmaam ay in dhismaha xaruntan ay kaabeyso ko baca nololeed ee bulshada Gobolka.
dhinaca kale Marwada 1aad ayaa socdaal kan ku wehelinayey wafdi heer Federaal ah oo ay ka mid yihiin Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Md. Xamse Siciid Xamse, Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqul in saanka Marwo Deeqa Yaasiin Xaaji, Safiirka Soomaaliya ee M/Yurub Da njire Cali Siciid Fiqi, Agaasime Kuxigeenka Madaxtooyada Md.C/hi Sh. Cabdikariin, Agaasimaha Hay’ adda Saynab Moallim Foundation Md.Cayd aruus Maxamuud Ci smaan, Guddoomiyey aal iyo saraakiil ka tirsan dowladda.
Bangiga Adduunka oo ku dhawa aqay in Soomaaliya ay Bixisay Deyntii uu ku lahaa..
D/F/Soomaaliya ayaa bixisay lacagihii Ha y’adda horumarinta Caalamiga ah ay ku lah eed Soomaaliya si loo dhameystiro soo celi nta xiriirka caa diga ah ee Soo maaliya iyo Ba ng iga Adduun ka. Soomaaliya waxay dib ula soo noqotay hannaan ay ku heli karto taageero cusub oo toos ah oo uga imaa nayso hay’adda horumarinta caala miga. Waxay talaabo wanaagsan u qaaday hal abuurka daymaha looga cafinayo wad dama faqriga iyo soo kabashada sanada ha soo socda ayaa lagu yiri qoraal ka soo ba xay Bangiga Adduunka.
"waxaan u hambalyaynayaa DFS gaar ida yoolkaan taariikhiga kaasoo u ogolaan ayaa Soomaaliya in ay hesho taageero dhaqaale oo xooggan oo ka imaanaysa Bangiga ad duunka si loo horumariyo nolo sha dadka,, tani waxay salka u dhigaysa soo bogsho dha qaale iyo mid bulsho wax aan jecelahay ina an u mahad celiyo dowladda Norway oo fud udaysay habka dayn cafinta” sidaas waxaa yirri Axel van Trotsenburg, agaasimaha Maa mulka Bangiga Adduunka.
Hannaan la isku fahmay ayaa lagu bix y ay dhaqaalaha Bangigu ku lahaa Soomaal iya oo ay taageertay D/Norway kuna bixi say $365.9 million oo doolar oo dayn ah si Soo maaliya uga gudubto buundadaan, sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa Hey’adda lacagta Adduunka (IMF) iyo Bangiga Hor umarinta Afrika.
"waxaan ku faraxsanay in D/Norway ay door wanaagsan qaadatay si caalamka So omaaliya uga cafiyo daymaha ayna fur sad u hesho maalgalinta Hey’adda Horum arinta caalamiga, waxaan kaloo ku faraxsa nahay in Soomaaliya talaabo kale oo muh iim ah u qaaday hannaanka dhaafida day maha har ay” ayuu yirri Wasiirka Arrimaha Dibbadda ee Norway Ine Eriksen Søreide.
Caddeynta deymihii hay’adda horumarin ta Caalamiga ah waa fursad furaysa soo noq oshada Soomaaliya "waa cusub baa in oo baryay, waxaan rajeynaynan inaan ho ru u gu dhaqaaqno xoojinta xiriirka nagala dhax eeyo Bangiga adduunka iyo dhisma ha tiirar ka dhaqaalaheena si dalkeenu u gaaro bar waaqo ” ayuu yirri W/ Maaliyad da Somaliya Dr; C/maan Ducaale Bayle.
Wasiirka ayaa u mahad celiyay taageer ada buuxda ee Soomaaliya la garab istaa gtay dowladda Norway si ay bixiso dayntii Hey’adda Horumarinta Caalamiga ah.
Kulan ay asbuucii la soo dhaafay yee she en maamulka sare ee Bangiga adduun ka ayay ku muujiyeen taageerada ay u ha yaan kobaca xooggan ee daqliga sanadla ha ah ee dowlada, horumarka Siyaasada, Bulsha da iyo dhaqaalaha oo suurgaliyay in Soom aaliya ay halkaan soo gaarto.
Hay’adda horumarinta Caalamiga waa mid ka mid ah hay’adaha dhaqaalaha ugu weyn caalamka ee maalgaliya la dagaalan ka sab oolnimada wadamada taagta daran dhinaca dhaqaalaha, waxay bixisaa day mo ay yar yihiin amaba aan laheen dulsa ar oo gacan xooggan ka gaysta kobaca dhaqaalaha, nolo sha dadka iyo u adkay siga aafooyinka.
Hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista Da stuurka oo la kulmay madaxda ugu sareeysa ee Galmudug.
Wafdi uu hogaaminayo W/Arrimaha Dast uurka Md.Saalax Axmed Jaamac oo gaaray Dhuusamareeb ayaa kulamo wad atshi ah la qaatay Golaha Baarlamaanka iyo G/Wasiira da ee Galmudug, Wafdiga oo isugu jira mas uuliyiin katirsan Wasaaradda Arrimaha Dastuurka,
Gudigga Baarlamaanka ee La-socodka Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka iyo Gudigga Madaxabanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka ayaa waxa ay ma daxda iyo shacabka Galmudug ka talogeli nayaan qodobada dib-u-eegista lagu sam ee yay ee dastuurka.
Wafdiga oo kolkii hore la kulamay G/Ba arlamaanka Galmudug ayaa waxaa ay war bixin ka siiyeen halka ay marayaan howlaha dib-u-eegista dastuurka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Md.Max med Nuur Gacal iyo G/Ku-xigeenka 2ad ee Baarlamaanka Galmudug Marwo Faad umo Amiira Faandhe ayaa si wadajir ah ugu boga adiyay howlaha ay hayaan hay’ adaha u xils aaran dib-u-eegista dastuurka iyaga oo u ballanqaaday wadashaqeyn iyo iskaashi.
Sidoo kale, G/Gudigga Baarlamaanka ee La-socodka Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Das tuurka Sen Cabdiqaybdiid ayaa u she egay G/Baarlamaanka Galmudug inay ka faa’Ide ystaan kulankan islamarkaana talad ooda ku biiriyaan dhameeystirka dastuur ka KMG ah.
Si taa lamid ah, Xildhibaanada Baarl am aanka Galmudug ayaa soo jeediyay talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dib-u-eegista dastuurka waxa ayna ka dood een qodobo dhowr ah oo dib-u-eegis lagu sameeyay iyo arrimaha masiiriga ah ee ku jira dastuurka.
Dhanka kale, Wafdiga uu hogaamina yo Wasiirka Ariimaha Dastuurka Md.Saal ax Ax med Jaamac ayaa waxa ay galabta kulan wadatashi ah la yeesheen G/Wasi irka ee Galmudug ee uu hormuudka u yahay Mada xwenayha Cusub ee Galmudug Md.Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), wa xaana Wasii rada Galmudug loo soo ban dhigay arrimaha masiriiga ah ee u baahan in DFS iyo D/G/y ada ay heshiis siyaasa deed ka gaaraan iyo guud ahaan howlaha dhameeystirka dastuur ka oo gebogebo ku dhow.
Madaxweynaha Galmdug Md.Axmed Qo orqoor ayaa uga mahad celiyay wafdi ga hay ’adaha u xilsaaran dib-u-eegista da stuurka safarka shaqo ee ay ku joogaan Dhuusamr eeb waxa uuna sheegay in Gal mudug kasoo kabaneyso dib-u-dhacydii ku dhacay islamarkaana ay door lixaad leh ka qaadan doonto dib-u-eegista dastuur ka. Sidoo kale Madaxweynaha waxa uu ca deeyay in G/W/Galmudug ay sida ugu dha khsiyaha ba dan talooyinkooda ku saabsan dhib-u-ee gista dastuurka ay u soo gaarsiin doonaan Wasaaradda iyo 2da Guddi.
Wasiir Salaax Axmed Jaamac oo kulanka ka hadlay ayaa yiri "Waxa aan marka hore ka mahad celinayaa soo dhaweeynta gob onimada leh ee ay noo sameeyeen ma dax da iyo shacabka Galmudug, waxa aan hal kan u joognaa howl masiiri ah oo Soom aal iya muhiim u ah; DFS waxaa ka go’an in waqtigii loo asteeyay lagu dhameeystiro dast uurka iyada oo xoogga la saarayo la-tashiga dadweynaha iyo ka qaybgal loo dhanyahay oo maanta aanu Galmudug u joogno”.
Ugu dambayn, Gudoomiye Senator Ca bdiqaybdiid ayaa Madaxweyne Qoorqoor ku wareejiyay nuqul kamid ah qodobada dib-u-eegista lagu sameeyay waxaana waf diga uu hogaaminayo Wasiir Saalax Jaa mac ay kulamo la yeelan doonaan qayb aha kala du wan ee bulshada Galmudug si taladooda loo dhageeysto ugana qaybqaa taan dhameeys tirka dastuurka.
Maamulka Mandhera: "Aad ayey noogu ad kaatay inaan 2 mid kala doorano…”
Maamulka Mandhera ayaa bayaan ka soo saaray kulan ay maanta ka yeesheen xa aladda amni ee Magaalada ka dib daga alkii Isniintii ka dhacay D/Beled Xaawo, oo saam eyn xoogan ku yeeshay magaala daas.
Maamulka ayaa sheegay in Jubaland iyo dowladda Soomaaliya ay ciidamo ku soo kala ururinayaan Mandhera iyo B/Xaa wo oo ah halka ay kala joogaan.
"Xaaladdan waxay abuurtay argagax iyo barakac xooggan oo ka jira xaafadaha Bulla Customs, Bulla Garay, Bulla Mpya, Bulla Ar abia, Bulla Busle iyo Border Point 1 oo ka wada tirsan Mandhera,” ayaa lagu yiri baya anka.
Maamulka Mandhera waxay sheegeen in ay dhexda u galeen loolan diblomaasiya de ed oo u dhaxeeya D/Kenya iyo D/Soo maaliya, kaasi oo saameyn amni oo xoo g gan ku yeesha M/Mandhera.
"Aad ayey noogu adkaatay inaan kala do orano taageeridda mowqifka dowladdee na, iyo dhibka haysta shacabka magaalad eena oo ah kuwa dagaalka uu saameyna yo, ta asi oo wax aan macquul ahayn ka dhigtay inaan ka aamusno dhibaatada sha cabkaa” ayaa lagu yiri qoraalka.
Maamulka ayaa sheegay ka aamuska do wladda dhexe ee Kenya ee xaaladdan ay ho gaamiyayaasha W/Bari ku qasabtay inay xal u raadiyaan xaalad awoodahooda ka baxs an, taasi oo aad ay u dhibsanay aan.
"Waxaanu ka codsaneynaa dowladda dhexe inay dejiso xiisadda, islamarkaana u xaqiijiso shacabka ammaankooda iyo badba adadooda, si aysan u lumin kaloos nidii lagu qabay,” ayaa lagu yiri qoraalka.
"Ma ogolaaneyno in danaha dhinacyo shi sheeye laga hormariyo tan shacabkee na.
Waxaan sidaas darteed ka dalbaney naa dowladdeena inay ceyriso ciidamada shishe eye ee ku sugan Mandhera, sida ugu dhaqsi yaha badan.”
Qoraalka ayaa ugu dambeyn ugu baaq ay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta inuu si deg deg ah gacan uga gaysto xaal adda, uuna damaanad qaado badbaadada shacab ka.
DF oo war ka soo saartay khasaaraha Al-Shabaab ee duqeyntii Kuunya Barow
War kasoo baxay DFS ayaa lagu shee gay in ciidanka xoogga dalka oo kaashan aya kuwa Mareykanka ee AFRICOM ay du qeyn la beegsadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Duqe ynta ayaa waxaa la sheegay in ay ka dhacday deeg aan ka Kuunyo-Barrow ee G/ Sh/ Hoose, oo ay ma amulaan ururka Al-Shabaab. Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa lagu sheegay warkan in lagu dilay du qeynta, in kastoo aan la shaacin magacii sa iyo awooda uu ku dhex lahaa dagaal ama yaasha Al-Shabaab.
Kuunyo Barrow oo ah deegaan gacan ta ugu jira Al-Shabaab, waxayna tani noqo nay saa duqeyntii 3-aad oo ay diyaaradaha Mar eykanku ka fuliyaan mudo 10 maalm ood gudahood ah.
28-kii bishii hore ee Febraayo, 2-dii bi shan Maarso iyo 5-tii isla bishan Maarso ayey diyaaradaha Mareykanku duqeymo ka geysteen deegaankaan ka tirsan G/Sh/Ho ose.
Somaliya iyo Kenya oo cadaadis lagu saarayo joojinta xiisadda xuduuda
War qoraal ahaa oo Khamiistii ka soo ba xay Madaxtooyada Somaliya ayaa lagu she egay in Madaxweyne-yaasha Somaliya iyo Kenya, ay khadka teleefanka kaga wada ha dleen ka shaqaynta suggida amniga xudu uda iyo xasiloonida gobolka.
Warkan ayaa waxaa loo arkay mid durbaba hoos u dhigaya xiisaddii adkeyd ee 2da dal soo gala dhex-gashay 7aadkan, ka dib dagaalkii qaraaraa ee Isniintii ka dhacay xud uuda B/Xaawo la wadaagto D/Ma ndhera iyo hadaladii xanaf lahaa ee la is weydaarsaday.
Prof. Afyare Cilmi oo fallanqeeya arrim aha caalamka, gaar ahaan kan gobolka ay aa sheegay inuu jiro culeys 2da dhinacba ka ga imaanayay caalamka, oo ku aaddanaa in ay xiisadda ka soo koror tay xuduuda qabo ojiyan.
Prof. Afyare Cilmi ayaa sheegay cadaad iskan in uu yimid, ka dib baqdin uu caalamka ka muujiyay in xiisadda 2da dal ay xasilooni darro u horseedo Geeska Afrika.
"In xaaladda hadda la dejiyo oo hoos loo soo dhigo, waxaa la dhihi karaa waxaa aad uga dambeeyo oo u ordaayo dalal dibadda ka ah, kuwa quwadaha waaweyn ha ahaad een ama kuwaan Yurubta amaba hay’ado ka le. Runtii cadaadis badanoo waxaa jiray ka imaanayay dowladahaasi, baqdin laga qabo in gobolka xasilooni darro ay u horseedo arri maha noocaanoo kala ah.” Ayuu yiri Prof. Afyare Cilmi.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in cadaadi ska la saaray 2ada dowladood uu yahay mid looga hortaggayo in xiisadda xuduuda ay ku lug yeeshaan dalalka saaxiibada la ah DFS iyo Jubbaland.
"Sababaha arrintaas loo samaynayo wax aa weeye D/Somaliya oo saaxiib dhow la ah Itoobiya iyo Jubbaland oo saaxiib la ah Kenya, meesha waxaa dhici karta in dagaal kii xitaa noqdo mid ay soo galaan Itoobiyaan kii,Kenyankii iyo Eritareeyaankii, marka ca bsi noocaas ah ayaa jirta.” Ayuu yiri Prof. Afyare oo la hadlay BBC.
Guddiyo ka kala socda Dowladaha Som aliya iyo Kenya ayaa la fillaya inay ka wada fariistan arrimahan, iyagoo markaasi si wadajira uga wada shaqaynaya soo afjarid da xiisadda ka jirta xuduuda kala qaybisa labada dal.
Khayre oo ka qaybgalay munaasabad da abaal marinta sanadlaha ee ganacsiga
Md.Xasan Cali Khayre oo Muqdisho uga qaybgalay munaasab adda abaal marinta sanadlaha ah ee gan acsi ga Soomaaliyeed ayaa ball anqaad ay in dowladdu ay ganacsatada kala shaqey nayso horumarinta ganacsiga. "Aragtida aan ganacsatada ka qabo wa xa ay tahay inay dalka ay u soo shaqeey een, samata bixiy eenna xilli dalka ay dhib aata ka jirtay iyaga oo u dul qaatay dhibaat ada jirtay.
Dhaqanka ganacsatada Soomaaliyeed waxuu waligiis ku saleynaa aaminaad, wax uuna ka madax bannaanaa musuq maasuq, waana dhaqan aan dunida inteeda kale ka jriin oo dadka Soomaaliyeed ay ku amaanan yihiin.” Ayuu yiri R/ WasaareKhayre,"
Wax aa la soo gaaray xilli ganacsatada Soomaal iyeed ayan ka maar min inay hel aan dowlad xoog leh oo ay aamini karaan, shaqeyneysa na. Waa la soo dhaafay waq tigii ganacsata du ay dowladda ka baqi jir een, waa las oo dhaaf ay waqtigii dowladda fahamkeedu uu liitay oo aaney fahmeyn aw oodda uu leeya hay ganacsigu.
in ganacsatada loo fudude eyo ganacsiga, laga qaado qabadaha hor ya alla si ay can shuurta u bixiyaan, canshu urt aas la bixiya yna iyada oo aamin ah loo gu adeego umm adda Soomaaliyeed waa sida kaliya ee dowl andimadeennu ku hir-geli karto.” Ayuu raaci yay Md.kheyrre .
R/Wasaare Khayre ayaa sidoo kale wa xuu sheegay in deyn cafintu ay meesha ka saa reyso caqabadihii ku gudbanaa ganac satada iyo dadka doonaya inay maal gashad aan dalka.
Md.Khayre ayaa caddeeyay in dowlad aan ganacsatadeeda wanaajin ayan umma ddeeda wax u qaban karin sidoo kalana gan acsato aan dowladdeeda la shaqeyna ay san gaareyn horumar ganacsi oo ballaar an, waxuuna ku baaqay in ganacsatada iyo do wladdu ay ka wada shaqeeyaan hor umarka dalka iyo qaabkii ummadda Soom aaliyeed looga faa’iideyn lahaa fursadaha ka dhalana ya deynta dalka laga cafinayo.
Maamulka Xaaf oo jawaab ka bixiye he shiis la sheegay inay la galeen Qoor Qoor
Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug gar abka M/Gaalkacyo Ibraahim Xasan Guure eye oo warbaahinta kula hadlay M/Gaalkac yo ayaa beeniyay inay heshiis la galeen ma daxweynaha Galmudug Md.Axmed Cabdi Qoor Qoor.
Madaxweyne ku xigeenka Qoor Qoor, Cali Daahir Ciid oo u warramay VOA ayaa sheegay inay heshiis la galeen Axmed Duca ale Geelle (Xaaf) oo horay uga biyo diiday doorashadii Dhuusamareeb.
Ciid ayaa carrabka ku dhuftay in Xaaf oo sheeganayey inuu weli yahay madaxeyn aha maamulka Galmudug ay ka qanciy een waxyaabihii uu ka tabanayey, Hase ye eshee Ibraahim Guureeye, ayaa shee gay in aysan jirin xitaa wax wadahadal ah oo dhex maray Xaaf iyo Qoor Qoor, iska daa heshiise, isla markaana madaxweyna ha ra smiga ah ee Galmudug uu yahay Xaaf.
Waxaa uu sheegay inay ku howlan le ey ihiin sidii loo xallin lahaa tabashooyinka kala duwan ee M/Galmudug, si maamulk ooda u shaqeeyo, sida uu hadalka u dhig ay ,Guur eeye ayaa ugu baaqay in dowlad da dhexe ee Soomaaliya ay joojiso dagaallada uu she egay inay colaadaha uga hor inayso degaan ada maamulka Galmudug iyo dhammaan gobolada Soomaaliya.
Maamulka Galmudug ee Xaaf ayaa fa dhi ka dhigtay K/Gaalkacyo, oo ay ku xoog gan tahay beesha Xaaf, halka maamulka Galm udug ee Qoor Qoor uu hadda maamulo inta badan D/Galmudug,ka dib markii ay ka adaa kaadeen Ahlu-Sunna xigasho:-voa
Ciidanka cusub Danab oo dhoolatus ku soo bandhigay Ballidoogle
Ciidan cusub oo ka tirsan Xoogaga Kum aandooska Danab ee Ciidanka Xoogga Dal ka ayaa Khamiistii dhoolatus ciidan ku soo bandhigay Garoonka Ballidoogle ee Gobolka Sh/Hoose.
Ciidankan oo muddooyinkii ugu dambey say uu Mareykanka ku tababarayay Garoon ka Ballidoogle ee duleedka D/Wanlaweyn ay aa waxaa loogu talagalay in ay la dagaal amaan Ururka Al Shabaab.
Ciidanka oo dhalinyaro u badan, tiradood una ay tobonaan gaareyso ayaa waxay yih iin dhallinyaro ka qalin jebisay jaamacadaha dalka ku yaala, loona qaatay in la askare eyo.
Munaasabad shalay ka dhacday Xerada Ballidoogle ayaa tababarka loogu soo xiray ciidankan cusub, waxaana munaasabadaasi ka qaybgalay Saraakiil ka socday Taliska Ci idanka Xoogga Dalka iyo iyo xubno kaloo met elayay Wasaarad da Gaashaandhiga..
Turkiga & Ruushka oo Heshiis Xabbad Jo ojin ah kaGaaray Xiisadda Suuriya
Madaxweynayaasha Turkiga iyo Ruushka ayaa heshiis xabbad joojin ka gaaray xiisadda ka taagneyd gobolka Idlib ee dalka Suuriya.
Heshiiska xabbad joojinta oo dhaqanga lkiisa uu billaabmaya saqdi dhexe xalay xilliga ,dalka Suuriya wuxuu ka dhaqan galayaa G/w/galbeed ee Suuriya ku yaalla ee Idlib ee ay xasaraadda ka taagneyd.
Bishiila soo dhaafay ayay 36 askari oo Turki ah ay ku dileen weerar ay dowlad da Suuriya ku soo qaadday Ruushkana uu gacan ka siinayey.
Turkigana wuxuuna jawaab xooggan u weerarkaasi ka bixiyey uu ku qaaday ciid amada Suuriya iyo maleeshiya ay isgarab sadaan. Dhacdadaasi ayaa ka dhalatay cabsi ah inuu dagaal ay ka dhex abuurto Turkiga iyo Ruushka.
D/Kenya ayaa sheegtay in dhamaan ay heegan geliyeen ciidamadooda,isla mar ka ana xilligaan aan wax cabsi ah laga qa bin in gudaha dalkaas ka dhacaan weera ro xilli dhowr jeer ay weeraro ka fuliyeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
W/W/A/gudaha Kenya Dr. Fred Matiang ayaa sheegay in Daddu qaadey tallaabooyin dhowr ah oo lagu ilaa linayo dadka Shacab ka ah,isla markaanaa maanka siweyn loo ad keeyey.
Wasiirka oo booqdey Goobo Ganacsi oo ku yaalla Thika Road Mall ee M/ Nayr obi ay aa hadalkiisa intaasi ku daray in Cii damada Ammaanka ay u diyaarsan yihiin ka jawaa ida haddii ay weerarro ka dhac aan Gudaha Kenya.
"Xaqiiqdii isbedel ayaa ku yimid weera ra da Kooxaha Argagaxisada ah,hayeshee Ciid amadeena ay mar walba u diyaarsan yihiin sugida Amniga oo ay ka hort agaya an falal ka Amni darro ayuu yiri” Was iirka.
Hadalka W/W/A/gudaha Kenya Dr. Fr ed Matiang ayaa kusoo aadaya xilli dabay aaqa dii bishii hore uu Maraykanka ka dig ay in la bartilmaameedsan karo mid ka mid ah maqa ayadaha caanka u ah dalxi isayaasha ee Nairobi.
Cudurka Coronavirus ayaa kusii faafaya Mareykanka, ayada oo Khamiistii laga helay afar gobol oo hor leh iyo mag aalada San Francisco. Tirada dhima shada ayaa sidoo kale gaartay 12 qof, ayada oo qofkii ugu dambeeyey uu ku dhi ntay deegaanka King County ee Gobo lka Washington, halkaasi oo lix qof ay hor ey ugu dhinteen.
Ugu yaraan 57 kiis oo cusub oo cud urka ah ayaa Khamiistii laga xaqiijiyey gu ud aha an Mareykanka, wuxuuna faafitaan ka gaa ray gobollada Colorado, Maryland, Tennes see iyo Texas, iyo magaalada San Fransi sco.Gobollada Texas iyo Maryland ayaa mid walba wuxuu xaqiijiyey saddex kiis oo la xiri ira cudurka Coronavirus, halka Tenn es see iyo Colorado laga helay hal kiis midkiib a.
Tirada guud ee gobollada Mareyk anka ee cudurka laga xaqiijiyey ayaa had da ah 17 gobol. Dhowr ka mid ah dadka cusub ee cudurka uu haleelay ayaa lagu warramay aa in ay xaaladdooda aad u daran tahay.
20 kiis oo cusub oo cudurka ah ayaa laga he lay degaanka King County, oo ay ka tirt san tahay magaalada Seattle, taasi oo tira da guud ee halkaas gaarsiisay 51 qof, hal ka dh imashaduna ay mareyso 11 qof.
Si la mid ah dalal badan oo caalamka ka mid ah, Mareykanka ayaa wajahaya xa qiiqda cudurkan ayada oo dadka la wey dii stay inay guryahooda joogaan oo aysan sha qooyinka iman, iskuullada ayaa la xir ay, waxaana sidoo kale la joojiyey isu-ima atin ka dadka ayada oo la baajiyey dhacdo oyin ka cayaaraha. In ka badan 3,200 oo qof ay aa cudurk an ugu dhintay caalamka oo dhan.
Hoggaamiyeyaasha Waqooyi Bari oo 6 qodob kasoo saarey dagaalkii Beled-Xa awo & xiisada taagan
Hoggaamiyeyaasha Siyaasadda ee G/ Waqooyi ee dalka Kenya aaya kulan ay yee sheen waxaa ay uga hadleen xaaladda ka jirta M/Mandheera iyo dhibaatooyinka amni ee hadda taagan.
War-Saxaafadeed ay kulanka kasoo saar een ayaa waxaa ay kusoo dhaweeyeen wa da hadalkiis & heshiiskii dhexmaray Madaxw eyne Uhuru Kenyatta iyo Madax weynaha Soomaaliya Maxamed C/hi Farmaajo ee ku saabsanaa dib-u-xasilinta xiis adda u dhex eysa labada dhinac ee uu saa meeyey daga alkii ka dhaca xadka Kenya iyo Soomaaliya.
"Annaga oo ah hoggaamiyeyaasha W/ Bari, isla markaana ah deris dhow oo aan Soomaaliya nahay, waxaan aaminsanah ay inaan wax ku kordhin karno oo ay naga go’ an tahay inaan ka mid noqono Amniga Qar anka iyo danaha istiraatiijiyadeed ee wadda nkena ayaa lagu yiri” War-Saxaa fadeedka.
War-saxaafadeedka ay soo saareen oo ka kooban lix qodob oo ay kaga hadleen xa alada Beled-Xaawo & dagaalkii dhacay Ho os Ka Akhriso.
1. In ka badan hal bil ayaa waxaa jiray khi laaf weyn oo udhaxeeya Dowlada G/ Jub aland iyo DFS Si kastoo ay ahaataba saba baha keenaya lama xakameynin, DF waxay go’aansatay inay la wareegto gac an ku ha ynta maamulka iyo amniga mag aalooyinka xuduudaha ee B/Xaawo iyo Do olow. Tall aabadan ayaa dhalisay in si buu xda loogala wareego maamulka Jubaland iyo ciidamade eda amniga halkii ay ku su gnaayeen ,iyaga oo go’aansaday in ay u gudbaan xadka Ke nya oo ay kaga sugna ayeen meel dhow Mandheera.
2. Maalintii Isniinta 2-dii Maarso labada ci idan ayaa midba midka kale ku weerarey iya da oo aan la ogeyn khasaaraha 2da dhi nac ka soo gaaray laakiin waxaa 12 qof ku dhaa wacmeen M/Mandheera sababo la xir iira rasaasta faraadan oo kusoo dhacdey.
3. Tan iyo markaas, ma jirin wax weerar ah oo ka dhex dhacay kooxaha dagaalla ma ya hase yeeshee waxaa jira nabadgel yo xu mo iyo xiisad ka dhex jirtay 2da dhi nac ee dagaallamaya. Xaaladdaani waxay abuurtay argagax waxayna horseeday in ay dadku ka qaxaan deegaannada ku har eereysan M/ Mandheera, sida Bulla Kasta mka, Bulla Gar ay, Bulla Mpya, Bulla Ara bia, Bulla Busle iyo Border dhibic 1.
4. Saadaalin la’aanta xaalada ayaa ah mid welwel gelineysa dadka iyo hoggaami ye ahaan waxaan ku qabnaa inta u dhaxa ysa caqabadaha diblomaasiyadeed ee u dhex eeya ummaddeena iyo Soomaaliya na tiijada ka dhalanaysa saameynta khil aafka iska horimaadyada u dhexeeya koo xaha da gaallamaya ee Soomaaliya oo saa meyn we yn ku leh amniga dadka reer Man dhee ra. Waxay noqotay wax aad u adag in la is ku miisaamo inta u dhexeysa taage erida jag ada Dowladeena iyo matalaada dhibaa tada haysata dadkeena kuwaas oo si isko od ah ula qabsaday isku dhaca ta as oo noo suurta gelin weyday inaan sii wadno inta dadkeen na ay silica ku jiraan.
5. Waxaan ka codsaneynaa dowladda in ay kala furfurto xiisadan oo ay shacabka u xaqiijiso nabadgelyadooda iyo amma anko oda. Illaa iyo haatan xaaladda qaabe ynta gobolka Mandheera waa mid lagu bur bur iyey kalsoonidii shacabka ay ku qa been do wladdooda taas oo ay keentay da yacaad, mudnaan khaldan iyo in maslaxa da gobolka bannaanka laga dhigo mid ka sarreysa tan muwaadiniinta u gaarka ah. Waxaan diida nahay in aan aqbalno in da naha hay’adaha kale ee dibedda ay ka sar reeyaan midka dadkeenna. Sidaa darteed waxaan dalbanay naa in dawladeena ay ka saarto ciidamada shisheeye MANDERA si dhaqso leh.
6. Ugu dambeyntii, waxaan ka codsan ey naa madaxweynaha Kenya Uhuru Ken yatta inuu gacan ka geysto xakameynta xaaladd an si deg deg ah dammaanad qa adka amni ga dadkeenna.
Waxaan fursaddan uga faa’iideysaneyn aa inaan weydiisanno Xoghayaha Gol aha ee Awood-u-dirirka Hon Eugene Wam alwa in laga caawiyo wax ka qabashada arrimaha bani’aadamnimada ee boqolaal ka baraka cayaasha ah ee ku sugan M/ Mandheera.
Maxkamadda Ciidamada oo la horkee nay nin Daacish ka tirsan
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa waxaa markale la horkeen ay nin ka tir san Ururka Daaci sh, oo billo ka hor M/ Muqd isho ku dilay askari ka tirsanaa Ciid anka Ilaa lada Xamar.
Ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Ca li Maxamed Faarax (Abuu Hureyra) ayaa as kariga oo lagu magacaabi jiray Maxamuud Cabdi Dhuxulow uu ku dilay Suuqa Siinaay ee D/Warta Nabadda. Dilka waxaa la sheeg ay inuu dhacay 5-tii bishii August ee sanad kii 2019.
G/sare C/hi Buulle Kamey, Xeer Ilaal iya ha Guud ee Maxkamadda C/Q/Sida ay aa waxaa uu Maxkamadda ka codsaday in xuk un dil ah lagu xukumo ninkan, oo dilka uu ga ystay uu ku wehlinayay nin kale, kaasoo bax sad ahaan kaga maqan gacan ta sharciga.
Gudoomiyaha Maxkamadda Darajada 1a ad ee CQS, Korneyl Xasan Cali Nuur (Shu ute) ayaa ku dhawaaqay in dhageysi ga dac wadda ninkan ay halkaasi ku soo geba-gabeeyen, go’aanka maxkamadana ay dib ka soo saari doonaan.
Kenya oo shaaca ka qaaday goobaha halista ugu jiro inuu ka dilaaco Corona
Kenya ayaa shaaca ka qaaday goobaha halista ugu jiro in-uu ka dilaaco caa-buqa Corona, wax-aana deegaanad-aas kamid ah ma-gaalooyinka xeebta ku yaal ee Mombasa iyo Kilifi, maadama halkaas ay dad badan u dalxiis tegaan, sida ay ku warrantay warba-ahinta gudaha.
M/Nayrobi ayaa kamid ah meelaha laga digay inuu ka bilowdo Corona maadama uu ku yaal garoon caalami ah.
Madaxa ka hortagga cudurrada ee Ke-nya, Daniel Langat ayaa sheegay in deegaa-nnada kale ee laga casbi qabo ay kamid yihiin gobollada galbeedka iyo waqooy bari.
Kenya ilaa haatan lagama soo sheegin qof uu ku dhacay caabuqa Corona ee ku baahay dalal badan.
Midowga Afrika oo Mar kale war kasoo saaray Xiisadda Soomaaliya iyo Kenya
Waxaa uu sheegay in Midowga Afr-ika, oo kaashanaysa Beesha Caalamka uu sii wadi doonaan inay si dhaw ula socdaan xaaladda labadda dal si looga baaqsado in Khilaafka sii xoogeysto.
Guddoomiyuhu wuxuu mar kale xaq-iijiiyay u diyaar ahaanshaha Ururka Midowga Afrika si loo taageero labada dal in ay yee-shaan wadahadal wax ku ool ah oo lagu hor-umarinayo nabadda, xasilloonida iyo deris wanaagga, iyada oo la waafajinayo astaam-aha iyo mabaadi’da Midowga Afrika.
Labadii bilood ee lasoo dhaafay do-wladdaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa eed-eymo kala duwan hawadda isku marsiiyay ka dib markii dowladda Soomaaliya ay she-egtay in ay Kenya ay faragalin ku heyso ar-imaha gudaha Soomaaliya.
Maxamed Bin Salmaan oo xiray 3 ka mid ah amiirada ugu sarreeya boqortooyada xilli ay halis soo wajahday
Dhaxal-sugaha Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salman ayaa xiray saddex ka mid ah amiirada ugu sarreeya qoyska boqo-rtooyada, oo ay ku jiraan boqorka walaalkiis iyo dhaxal-sugihii hore.
Tallaabadan ayaa loo arkaa mid Ma-xamed uu ku xajisanayo awooddiisa, iyo in-uu arko halis kusoo socota.
Xarigan ayaa waxaa shaaca ka qaa-day xubno ka tirsan qoyska boqortooyada oo la hadlay wargeyska New York Times. Sidoo kale sarkaal hore oo sare oo Mare-ykan ah ayaa xaqiijiyey xariga.
Waxaa sidoo kale la xiray Amiir Maxamd bin Nayef, oo ahaa dhaxal-sugihii hore iyo wasiirkii arrimaha gudaha boqort-ooyada, kaasi oo xiriir wanaagsan la lahaa sirdoonka Mareykanka intii uu xilka hayey.
Bin Nayef ayaa labadii xil ee uu hayeyba waxaa ka qaaday Maxamed bin Salmaan 2017-kii, kaasi oo sidoo kale gel-iyey xabsi guri.
Waxaa sidoo kale la xiray walaal-kiisa ka yar Amiir Nawaf bin Nayef.
Mid ka mid ah sababaha la rume-ysan yahay in Maxamed bin Salmaan uu u xiray amiiradan ayaa ah gabowga aabihiis boqor Salmaan oo hadda ah 84 jir.
Waxaa loo arkaa in Maxamed bin Salman uu doonayo inuu xabsiga sii dhigo shakhsiyaadka ka hor iman kara inuu awoodda la wareego marka boqorka uu geeriyoodo ama uu kursiga iska wareejiyo.
Amiir Axmed, ayaa si kastaba horey u muujin wax astaamo ah oo uu ku dama-csan yahay inuu kula loolamo Maxamed bin Salmaan.
Amiir Axmed ayaa ah walaalka kal-iya ee la dhashay boqor Salmaan ee weli nool.
Dowladda Sacuudiga kama hadlin xariga xubnahan, islamarkaana safaaradda boqortooyada ee Washington oo wax laga weydiiyey waa ay diiday inay jawaab ka bi-xiso.
Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa muujiyay kalsoonida uu ku qabo kooxdiisa kahor kulanka Manchester derby.
Shabakada "Sky Sports” ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay macalin Ole Gunnar Solskjær kahor kulaka Manchester derby, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
"Waxay dareemayaan kalsooni markay soo bandhigaan heerar kala duwan kaddib markii ay ku soo guuleysteen garoonka Bernabeu iyo inay ku guuleysteen ​​finalkii koobka Carabao Cup, sidaas darteed waxaan aaminsanahay inay soo bandhigi doonaan qaab ciyaareedkoodii lagu yaqiinay, anaga sidaas oo kale ayaan sameyn doonaa”.
"Waxaan rajeyneynaa in kulankaani uu fiicnaan doono, waxaan rajeynayaa inuu ku dhamaado 3-4 sida aan horeyba u aragnay, waxaa jiray kulamo badan Clásico ah ee inoo dhaxeeyay, waxaanu sameyn doonaa wax kasta oo aan sameyn karno, si kulanka uu u noqdo mid Clásico ah”.
"Dagaalka afarta xarumood ee ugu sareysa horyaalka ayaa sii xoogaysanayay usbuucyadii la soo dhaafay, Man United waxay seddex dhibcood ka hooseysaa Chelsea, halka kooxaha Wolverhampton, Tottenham iyo Sheffield ayaa sidoo kale tartamayaan”.
"Haddii aan 6 dhibcood ka helno kooxaha Manchester City iyo Tottenham, markaas waxay ina siin doontaa fursad aad u wanaagsan” ayuu yiri tababare Ole Gunnar Solskjær.
ENGLAND - PREMIER LEAGUEMARCH 7
15:30 Liverpool ? - ? AFC Bournemouth
18:00 Arsenal ? - ? West Ham United
18:00 Crystal Palace ? - ? Watford
18:00 Sheffield United ? - ? Norwich City
18:00 Southampton ? - ? Newcastle United
18:00Wolverhampton Wanderers ? - ? Brighton & Hove Albion
20:30 Burnley ? - ? Tottenham Hotspur
SPAIN - LALIGA SANTANDERMARCH 6
15:00 Eibar ? - ? Mallorca
18:00 Atletico Madrid ? - ? Sevilla
20:30 Barcelona ? - ? Real Sociedad
23:00 Getafe ? - ? Celta Vigo